Baridda xagga Tirtiridda Nukliyeerka: Toddobaadka Hub ka dhigista ee 2018 - Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada
Toddobaadka Hub ka dhigista - Oktoobar 24-30, 2018
Barida ku wajahan baabiinta Nukliyeerka
Qaar ka mid ah talooyinka Betty Reardon
Markii ugu horreysay ayaa loogu yeeray 1978-kii Dukumentiga ugu dambeeya ee UN kii ugu horreeyay Kulan Gaar ah oo ku saabsan Hub ka dhigista, Toddobaadka Hub ka dhigista waxay bilaabmaysaa sanadguuradii aasaaskii UN. Waa wakhti barayaasha nabadda ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka iyo fursadaha ka dhalan kara dadaallada ku wajahan waxa Elise Boulding ay ugu yeertay "adduun hub la'aan" Sida Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Nabadda ee ku-biirinta ujeeddooyinka usbuuca, waxaan bixinnaa qalab si loo bilaabo dood ku saabsan baabi'inta hubka nukliyeerka, iyo ka fiirsashada qoritaanka "taariikh cusub."
“…. waxaan fursaddan uga faa'iideysaneynaa inaan qorno taariikh cusub. ”
-Embasador Patricia O'Brien, Ergada Joogtada ah ee Ireland ee Qaramada Midoobay, Maarso, 2017 fadhigii furitaanka shirkii diidmada heshiiskii mamnuucay hubka nukliyeerka.
Adduun hub ka dhigis ah oo nabadeed muddo dheer ma ahayn oo keliya aragti dhiirrigelin iyo rajo dhiirrigelin leh, laakiin ujeeddada siyaasadeed ee dhabta ah ee falsafadayaasha, dhaqdhaqaaqayaasha, iyo dowladeed (sic), in badan oo ka mid ah ayaa qaabeeyey amarka adduunka ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Amarkaasi, si kastaba ha ahaatee, wuxuu cabudhiyay aragtida, muddo tobanaan sano ahna dib ayuu u dhigay dood kasta oo wax ku ool ah oo laga lahaa himilada iyada oo loo daneynayo "ku-habboonaanta" iyada oo lagu taageerayo xaqiiqada siyaasadeed ee weli gacanta ku haysa. Marka laga eego aragtida jinsiga aragtida adduunka ee xaqiiqda siyaasadeed ee macneheedu yahay dagaalka iyo xagjirnimada waxaa lagu muujiyey inay aasaas u tahay aabbo. Aasaaska awoodeed ee amarka caalamiga ah waxaa muddo dheer ka horyimid haweenka u ololeeya haweenka iyo dhawaanahanna in badan oo ka mid ah nabadda adduunka iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa hub ka dhigista.
Waxaa loo xilsaaray shakhsiyaad, bulshada rayidka ah iyo ururada nabada, inta badan iyada oo lala kaashanayo qaar ka mid ah hay'adaha khaaska ah ee Qaramada Midoobay kuwaas oo rajada hub ka dhigista ka dhigaya mid nool, iyagoo si hagar la'aan ah uga shaqeynaya xaqiijinta hadafka ugu dambeeya ee nidaamka xasilloonida hubaysan ee caalamiga ah. Tobannaankii sano ee xaqiiqda ahayd dhaqdhaqaaqa dadweynuhu wuxuu sii waday inuu ku dadaalayo himilada adduunka oo ay maamusho hay'ado loogu talagalay in lagu ilaaliyo nabadda laguna gaaro shuruudaha amniga aadanaha. Ujeeddada koowaad ee loo socdo himiladaas ayaa ah baabi'inta hubka niyuukleerka ee ku aaddan 1963 Heshiis Mamnuuca Nukliyeerka (NTBT) waxay ahayd tallaabo muhiim ah. 7-dii Luulyo, 2017 "Annaga dadyowga" ayaa ku dhiirrigelinay Qaramada Midoobay inay korsato Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka, talaabo weyn oo loo qaaday himiladaas iyo aragtida ugu dambeysa ee nabada iyada oo loo marayo guud ahaan iyo kala dhantaalnaan dhammaystiran sida ay caddeeyeen Pope John XXIII iyo Madaxweyne John F. Kennedy hadalo yar ka hor ansaxinta NTBT (sidoo kale eeg Aynu Baadhno Fikirkeenna Nabadda halkan waxaa lagu daabacay Oktoobar 13, 2018). Heshiiskaasi qayb yar kamuu ahayn abaabulka haweenka iyo bulshada rayidka ah si loo dalbado adduun nabdoon, ka wasakh yar, nabad badan.
Markuu u kuurgalay Toddobaadka Hub ka dhigista ee Qaramada Midoobay (Oktoobar 24-30), anigoo sharfaya adkaysiga iyo guulaha ay gaareen Qaramada Midoobay iyo bulshada rayidka ah ee adduunka, waxaan u soo bandhigeynaa sida soo jeedinta ah barashada iyo ka doodista waxyaabaha laga soo qaatay xisaabinta bulshada rayidka / iskaashiga Qaramada Midoobay ee soo saaray heshiiska. Xisaabta Ray Acheson ee habka heshiiska ayaa ah hal cutubka cusub ee ka qayb qaatay daabacaaddii labaad ee dhowaan la soo saaray Jinsiga lama huraanka ah: Amniga Qaranka iyo Amniga Aadanaha (halkan guji si aad u hesho faahfaahinta buugga). Qeybaha waxaa kahoreeyay faallooyinka tifaftireyaasha (Reardon iyo Hans) oo ay ku xigto talooyin ku saabsan milicsiga, ka hadalka iyo waxqabadka arrimaha ku saabsan cutubka Ray. Baadhitaan dheeri ah ayaa lagu daray kan buugga lagu soo bandhigay. Weydiimaheeda ayaa ah in la furo doodaha ku saabsan arimihii ugu dambeeyay ee hadda wajahaya dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee lagu baabi'inayo hubka nukliyeerka.
Qeybaha laga soo qaatay cutubka 18-aad Jinsiga lama huraanka ah
Maqaalkan Acheson wuxuu iftiiminayaa halganka ba'an ee ay wadaan kuwa ugu sarreeya aabbayaasha adduunka, awoodaha nukliyeerka, si looga hortago mamnuucidda hubka nukliyeerka… tooda iyo [kuwa] quruumaha kale oo dhan. …. waxay ka baqayaan in baabi’inta hubka nukliyeerka ay si wanaagsan u horseedi karto in la tirtiro dhamaan hubka wax weerara iyo ugu dambeyn guud ahaan iyo hub ka dhigis dhameystiran oo aas aas u noqoneysa nidaam amni oo bini aadam oo dhab ah oo aan horay loo arag oo dimoqraadiyada adduunka ah.
Hadafka nabada iyadoo loo marayo hub ka dhigis guud iyo mid dhameystiran waxaa in muddo ahba lahaa Ururka Haweenka Caalamiga ee Nabadda iyo Xorriyadda (WILPF). Ray Acheson wuxuu wakiil uga ahaa WILPF kooxaha bulshada rayidka ah ee kala shaqeeyay dowladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay dejinta iyo qaadashada Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka. Haweenka ururro badan ayaa door muhiim ah ka ciyaaray geeddi-socodka ay horseedka ka tahay Ololaha Caalamiga ah ee Baabi'inta Hubka Nukliyeerka (ICAN,) Abaalmarinta Nabadda ee Nobel 2017
Aabbanimo iyo bambo: mamnuucida hubka nukliyeerka ee ka dhanka ah mucaaradka ragga ragga ah
Waxaa qoray Ray Acheson
27-kii Maarso, maalintii ugu horreysay ee wadaxaajoodka Qaramada Midoobay ee lagu mamnuucayo hubka nukliyeerka, danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay, Nikki Haley, waxay furtay shirkeedii jaraa'id (Dimuqraadiyadda Hadda, 2017) oo ka soo horjeedda gorgortanka heshiis mamnuucaya hubka nukliyeerka, iyadoo leh, "Marka hore iyo ugu horeyn waxaan ahay hooyo, waxaan ahay xaas, waxaan ahay gabar. ” Iyo, “hooyo ahaan, gabar ahaan, ma jiraan wax aan u doonayo qoyskeyga oo aan ka ahayn adduun aan lahayn hubka nukliyeerka. Laakiin waa inaan noqonaa mid macquul ah”(Xoojinta ayaa lagu daray). ...
Hadallada Danjire Haley waxay ku qotomaan aabbe. Waxay tilmaamaysaa rabitaanka hub ka dhigista haweeneydeeda, laakiin waxay ku xireysaa rabitaankeeda inay "ilaaliso" qoyskeeda "baahida" haysashada hubka nukliyeerka mustaqbalka aan la cayimin. Diidmada laga mamnuucayo hubka nukliyeerka ayaa ah aabahood iyo cunsuriyadooda asaasiga ah. Dhowr ayaa daawaday gumeysiga (Egeland, 2016) iyo cunsuriyadda (Intondi, 2017) ee mucaaradka ku ah heshiiska mamnuuca. Sahamin yar ayaa ah aasaaska galmoodkeeda, oo salka ku haysa qaabab awoodeed awoowe iyo raganimo militari.
Waxaa jira cabirro dhowr ah oo ku saabsan isku xirka u dhexeeya awoodda awowdeed iyo ragga xagjirnimada ah ee gacan ka geysta isku xirnaanta muhiimada iyo kakanaanta. Waxaa jira "miisaanka meel walba ku yaal ee jinsiga" (Cohn, 1987) dhammaan khudbadaha hubka nukliyeerka iyo wadajirka hubka nukliyeerka ee ragannimo oo ay si cad u sharraxday Carol Cohn shaqadeeda aasaasiga ah ee jinsiga ee hadalka hubka nukliyeerka. Hadalku wuxuu diidayaa khibrada haweenka ku nool ee hubka ay soo qaateen qaar ka mid ah kuwa ku raad jooga baabi'inta nukliyeerka isla markaana ku adkeynaya kaligood lahaanshaha dhabta ah, ie diidmada aragtida dadka kale ee xaqiiqda. Diidmada noocan oo kale ah waa astaamaha aabbeynta, iyo cilaaqaadka cilmu-nafsiga ah. Waxay isku dayeysaa inay qiil u siiso oo ay ku xidho diidmada mamnuucista inay tahay "haweennimo" ama "daryeel-siin," sida ku jirtay shirkii jaraa'id ee mudaaharaadka Haley. Dhammaan cabirradan isku-dhafan ayaa muhiim u ah sahaminta iyo soo-bandhigidda si loo gaaro himilada ka-reebista iyo baabi'inta hubka nukliyeerka, iyo in laga gudbo caadooyinka aabbanimada ee hadda ka soo horjeedda baabi'inta.
In kasta oo diidmada xididada leh ee ay muujisay Haley oo ay ka dhawaajiyeen dawladaha kale ee awooda badan leh ee hubka nukliyeerka haysta, haddana shirku wuxuu ansaxiyay heshiis mamnuucaya hubka nukliyeerka July 7, 2017. Taariikhdan taariikhiga ah ee halgankii dheeraa ee looga soo horjeeday hubka waxaa lagu gaadhay hanaan ku lug leh baaxadda weyn inta badan dawladaha adduunka, ururrada caalamiga ah iyo bulshada rayidka ah - oo ay ku jiraan ururrada nabadda haweenka - ka dib dadaal tobanaan sano socday. In ka badan 130 dowladood (Ololaha Caalamiga ah ee lagu tirtirayo Hubka Nukliyeerka, 2017) ayaa kaqeybgalay shirka, halka maqnaanshaha dowladaha hubka nukliyeerka leh iyo xulafadooda taageerada hubka nukliyeerka muujisay diidmadooda. Dowladaha maqan waxay sii wadaan inay sheegaan “faa'iidooyinka amniga” ee hubka nukliyeerka. Marka la eego caddaynta baaxadda leh ee masiibada bani'aadamnimada iyo cawaaqibka deegaanka ee isticmaalka hubka nukliyeerka, (Fihn ed., 2013) saamaynta ba'an ee bey'adeed ee tijaabooyinkooda iyo wax soo saarkooda, iyo halista sii kordheysa ee shilalka shilalka ama ula kaca ah, weli inkiraan in amaanka bini aadamka uu sifiican uga adeegto xaqiiqda ah in wadamada aduunka badankood ay horey u diideen hubka nukliyeerka gebi ahaanba. ...
Sida Danjire Patricia O'Brien ee Ireland ay u sheegtay maalintii furitaanka wada xaajoodka heshiiska bishii Maarso 2017, "Kama qoreyno heshiis cusub oo dheeri ah halkan, waxaan ka faa'iideysaneynaa fursad aan ku qoreyno taariikh cusub, sidaasna waxaan ku sameyneynaa abuuro mustaqbal cusub, oo xasiloon, ka xasilloon oo ka siman dhammaanteen (Ergada Joogtada ah ee Ireland, 2017). ”
Tani waa aasaaska heshiiska mamnuuca. Waxaa laga wada xaajooday iyadoo ku saleysan geesinimo iyo rajo, halkii laga baqi lahaa iyo sinnaan la’aan. Waxay ahayd xaalad dawladaha iyo bulshada rayidka ah oo isu imanaya inay u istaagaan awoodda iyo rabshadaha, oo lagu dhaho awoodaha nukliyeerka, "waa nagu filan tahay, waxaan ku tallaabsan doonnaa adduun ka duwan, haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba."
Isbeddelku wuxuu dhacaa markii "raaxo la'aanta wax cusub la qabtaa ay ka yaraato sidii wax loo haysan lahaa," ayuu yiri Danjire O'Brien (Ergada Joogtada ah ee Ireland, 2017). Heshiiskani wuxuu horeyba uga dhigayaa dowladaha nukliyeerka ku hubaysan iyo kuwa ku tiirsan nukliyeerka kuwa sii xumaanaya. Nidaamka lagu horumarinayo heshiiskan, iyo sidoo kale qaadashadiisa iyo dhaqan galkiisa, wuxuu saameyn isbadal ah ku yeelan doonaa siyaasadaha iyo dhaqamada hubka nukliyeerka. Waxay durba saameyn isbadal ah ku leedahay xiriirka caalamiga iyo Qaramada Midoobay (Acheson, 2017b). Fahmitaanka iyo u fiirsashada firfircoonida jinsiga ee ku lugta leh raadinta baabi'inta nukliyeerka, waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa ka gudbidda aabbanimada iyo u dhaqaaqista xagga nidaamka amniga aadanaha ee suurtogalka ah. Kaliya waa arrin ku saabsan dadaal iyo daryeel aan gelino.
Xullo ka sooc ah baaritaanka cutubka sida lagu soo bandhigay buuga
Acheson wuxuu diiradda saarayaa khudbadda nukliyeerka "jinsi". Maaddaama haweeneyda haweenku ay dad badan ku baraarujiyeen luqadda jinsiga, sidee baan ugula mid noqon karnaa luqadda militariga iyo luqadda jinsiga-militariga ee shuruudaha looga doodo hubka iyo siyaasadda amniga?
Fikirka "Realist" wuxuu ahaa mid aad ufiican ciyaarta ka soo horjeedka heshiiska. Siyaabo noocee ayey haweeneyda [iyo kuwa kale] ee u ololeeya nabadgelyada aadanaha ay ula falgeli karaan kuwa dhabta ah?
Maxay awoodaha nukliyeerka ugu adkeysanayaan hadalka "bani'aadamnimada" ee ka adkaaday 130 waddan ee xubnaha ka ah ee taageeray heshiiska?
Sideen ugu adeegsan karnaa fahamka iska caabbintaas wadahadalka lala galayo awoodaha nukliyeerka?
Sidee iskaashiga ka dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah iyo bulshada rayidka ah u sii wadi karaa dadaallada lagu doonayo in heshiiska lagu “dhaqan geliyo”?
Maxay iskaga mid yihiin oo laga fahmi karaa inta udhaxeysa siyaasada kahortaga iyo rabshadaha jinsiga iyadoo loo adeegsanayo ilaalinta aabayaasha militariga?
Talooyin Dheeraad ah oo ku Saabsan Baaritaanka iyo Waxqabadka Fasalada Sare ee Sare, Koorsooyinka Shahaadada Jaamacadeed iyo Kooxaha Daraasada Dadka Waaweyn
Su'aalaha hoose waxay u maleynayaan in discussanku ay waxoogaa aqoon ah ka leeyihiin arrimaha hubka nukliyeerka ee hadda jira iyo inay akhriyeen qeybaha kore. In kasta oo weydiimaha ama qeybaha ay ka hadlayaan kiisaska Iran iyo Kuuriya, xaaladahaas waa in sidoo kale lagu daraa daraasadda dhibaatada nukliyeerka casriga ah.
Waxaan soo jeedinaynaa in macallimiinta iyo fududeeyeyaashu ay ka dhex akhriyaan baaritaanka oo dhan, ay sameeyaan fekerkooda si ay u go'aamiyaan inta iyo qaybaha baaritaanka ee waxtarka u yeelan kara ujeedooyinka kooxdooda waxbarasho ee gaarka ah.
Ujeedada baaritaankan ayaa ah in lagu kiciyo tixgalinta caqabadaha iyo fursadaha badan ee ka kooban dhibaatada sida lagu muujiyay cutubka Acheson iyo qaar ka mid ah isbedelada hadda jira oo caqabado hor leh ku ah baabi'inta hubka nukliyeerka. Waxaan sidoo kale u qaadaneynaa in "qorista taariikh cusub" ay ku baaqeyso fikir cusub. Waxaan dooneynaa inaan horumarino mas'uuliyad bulsheed, fekerka milicsiga ee dhammaan ardayda, si aan u kobcinno uguna dhiirrigelino inay si firfircoon ula shaqeeyaan arrimaha; si loo fahmo in kasta oo ay jiraan caqabado badan, tillaabooyinka xagga nabadda waa la qaadi karaa waana la qaadi karaa, yoolalkayagu waxay wajahayaan caqabado adag oo cabsi leh, laakiin ma ahan kuwo aan macquul ahayn.
Maaddaama qoraalkan GCPE uu ka kooban yahay warbixinta warbaahinta ee Mareykanku ku dhawaaqay inuu ka tanaasulayo Ciidamada Nukliyeerka ee heer dhexe ah Heshiiska waxaa ka wada xaajooday 1986-kii Madaxweynaha Mareykanka Ronald Reagan iyo USSR, Guddoomiye Mikhail Gorbachev, iyagoo u cuskanaya xadgudubyada Ruushka ee sanadihii ugu dambeeyay inay yihiin caqli gal. Hase yeeshe, dadka wax faaleeya, waxay soo jeedinayaan in walwalka istiraatiijiyadeed ee Mareykanka ee ku saabsan Shiinaha ay u badan tahay dhiirigelinta.
Maxay uga noqon kartaa ka noqoshada heshiiskan mustaqbalka Heshiiska Mamnuuca Nukliyeerka?
Sidee ayay dowladaha saxiixa iyo dhaqdhaqaaqa hub ka dhigista u sii wadi doonaan inay ku dadaalaan heshiiska oo dhaqan galaya sida sharciga caalamiga ah, ee ku qasbaya dhammaan dowladaha? Taasi miyay weli tahay himilo la jeclaan karo oo macquul ah oo loogu talagalay kuwa ka shaqeynaya sidii loo gaari lahaa nabadda adduunka iyo amniga aadanaha ee adduunka? Maxay yihiin casharrada kale ee ficil ee ku wajahan hadafka ay tixgelin karaan? Sidee bay u qiimeyn karaan oo ay uga dhex dooran karaan beddelaadda kuwa ballan qaadaya inay wax ku ool yihiin? (Siyaabaha sida dhabta ah loogu sameyn karo qiimeynta fasalka waxaa laga heli karaa GCPE marka la codsado.)
Miyaad maleynkartaa heshiis lamid ah waligiis oo laga wada xaajoodo, diyaariyo oo lagu faafiyo madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha? Ma noqon laheyd tallaabo dhab ah oo loo qaaday baabi'inta nukliyeerka? Maxaa ka dhigi kara inay lama huraan u noqoto labada dowladood? Sidee bulshada rayidka ahi u fududeyn kartaa gorgortanka noocaas ah?
Dib u eegista Derek Leebart Dib u habeyn weyn (The New York Times, Oktoobar 21, 2018, Dib-u-eegista Buugga, P. 18) Sr. Harold Evans, isaga oo tixraacaya isbahaysiga NATO wuxuu ilaalinayaa in madaxweyne Trump laga yaabo inuu "faas u qaado taxanaha hay'adaha siyaasadeed, ganacsi, iyo maaliyadeed si ku habboon tobanaan sano…. ” sida hadalada Madaxweynaha ka muuqata. U fiirsashada "moodada ku habboon" ayaa sidoo kale daaha ka qaadi karta in nidaamka adduunka ee la dhisay wixii ka dambeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka uusan hore u sii saarin darnaanta iyo culeyska kala duwan ee tijaabin doona.
Markaad eegto adduunka dhacdooyinka, dhibaatooyinka iyo isbeddellada ay tahay inaan tixgelinno haddaan nahay Danjire O'Brien wuxuu ku adkaystay inuu qoro "taariikh cusub"? Caqabado noocee ah ayaa laga hor imaan karaa? Fursado noocee ah ayaa imaan kara? Sidee dhaqdhaqaaqa hub-ka-dhigistu "ula kac ula midoogayaa" fursadahaas oo kale oo ay u daba-galaan isbadalada ay bixiyaan? Ma ka fikiri kartaa wax kasta oo aad qaban karto? Yaad la socotaa oo maxaad ku dhaqaaqi kartaa tallaabo noocan ah?
Muxuu noqon karaa seenyada “taariikh cusub?” Samee taariikh u dhigma dhacdooyinka u horseedi kara soo gelida dhaqan galinta Heshiiska Mamnuuca Nukliyeerka tobanka sano ee soo socota. Laga bilaabo maanta, maxaad u maleyneysaa inay ku dhici laheyd in la keeno baabi'inta hubka nukliyeerka sanadka 2030? Dhacdo kasta oo ku jirta taariikhda tixgelinta isbeddelada dhici lahaa inay dhacdo si ay u dhacdo. Marka xigta, dib u milicso isbeddelada fikirka iyo hadalka dadweynaha ee keeni kara isbeddeladaas. Tixgelin noocee ah ayaa la siiyaa jinsiga, u qabatinka amniga militariga, arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo badbaadada meeraha? Si kale haddii loo dhigo sidee bay isbeddelada fikirkeennu uga qayb qaadan karaan gaadhitaanka amni adduunyo oo ammaan ah? (Bayaanka Wadajirka ah ee Jinsiga iyo Hub ka dhigista oo loo geeyay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Hub ka dhigista iyo Amniga Caalamiga Oktoobar 17, 2018 ayaa gacan ka geysan kara fududeynta baaritaankaan. Discussants sidoo kale way ka fiirsan karaan inay kula talin lahaayeen ururada inay saxeexaan bayaanka oo ay siiyaan sababaha ay u gaadhaan go'aanadooda.)
Qaarkood waxaa laga yaabaa inay jecel yihiin inay ka horreeyaan qorista "taariikhdan cusub" iyadoo la soo ururiyay taariikh ahaan heshiisyada kala duwan ee hubka nukliyeerka laga wada hadlay intii u dhaxeysay 1963 iyo 2017. Qoraallada, taariikhaha iyo soo koobitaannada waxaa laga heli karaa shabakadda.
Shir dhowaan ka dhacay UN-ka ayaa lagu sheegay in "Adduun kale waa suurtagal." Maxaan sameynaa si aan uga dhigno mid macquul ah? Maxaan baran karnaa si aan awood ugu siino inaan sameyno?
Reeton Betty, Oktoobar 2018
#waxbarashada hub ka dhigista
# hub ka dhigis
Hadiyad maamuus ah Rosa Jiménez Ahumada, baraha nabadda ee Kolombiya
Waxbarashada Nabadda ee Louisville, Kentucky
Hub ka dhigista Qalbiyada iyo Maskaxda
June 2, 2021 Publications, Research 0
George E. Griener, Pierre Thompson & Elizabeth Weinberg waxay sahminayaan doorka laba-geesoodka ah ee hibakusha, qaarna waxay u ololeeyaan in gebi ahaanba laga takhaluso hubka nukliyeerka, halka kuwo kalena ay naftooda u hureen dadaallada aan aadka u muuqan ee ah in wax laga beddelo quluubta iyo maskaxda. Sidaa darteed, dhaxalka hibakusha si buuxda ayaa loo qadarin karaa iyadoo la baaro labada muujinta hoggaankooda ee xilligii nukliyeerka. [sii wad akhriska…]
Sunshine Land: Halka Dagaalku Dhab ahaan Yahay (South Korea)
December 31, 2017 Warar & Muuqaal 1
Ardayda dhigata fasalka lixaad ee S. Korea waxay ku labisan yihiin hub jidhkoodu le'eg yahay, koofiyadaha, iyo qoryaha bastooladaha u eg ee loo yaqaan 'BB'. Waxay u egyihiin booliiska rabshadaha yar yar, caruurta, oo loo qaybiyay laba koox, ka bood oo ku qosla dariiqa ay u galayaan Xarunta Khibrada Milatari ee Sunshine Land ee dhawaan la furay si ay u ciyaaraan khibrad dagaal tallaabo nool oo loo yaqaan 'ciyaarta badbaadada. Xarumahan khibrada milatari, halkaasoo dalxiiska, ciyaaraha, iyo khibrada milateri la isku xidho, dadka u dhaqdhaqaaqa waxay la kulmaan dagaal kacsan halganka ay ugu jiraan waxbarashada ku wajahan nabadda [sii wad akhriska…]
July 14, 2020 Warar & Muuqaal, Publications 0
Mawduucan saddexaad ee taxanaheena gaaban ee "Cusbooneysiinta Haweenka, Nabadda iyo Amniga," wuxuu soo bandhigayaa Epilogga tarjumaadda Kuuriya ee dhowaan la daabacay ee "Jinsiga iyo Nidaamka Dagaal" ee Betty Reardon. Kani waa kan ugu horreeya ee laba qoraal oo loogu dabaaldegayo tarjumaadda daabacaaddan taariikhiga ah. [sii wad akhriska…]
Baridda ku saabsan Nabadda iyo Nidaamyada Amniga Beddelka ah - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda